लघुकथा प्रतियोगिताको उनन्तीसौँ चरण : पुस्तान्तरण, तगारो र टोपीको पुकार विजयी | साहित्यपोस्ट
साहित्यपोस्ट	 प्रकाशित २२ पुष २०७८ २०:०१
साहित्यपोस्टले सञ्चालन गरेको घोस्ट राइटिङ् लघुकथा प्रतियोगिताको उनन्तीसौँ अङ्कमा डा. कुसुमाकर शर्मा गौतम, रेहित सैजु “विकल्प” र शिवप्रसाद पाण्डे विजयी हुनुभएकाे छ । यस प्रतियोगिताकाे अघिल्लाे साता नरेश अमात्य, प्रेम पुन मगर र चेतनाथ दाहाल विजयी हुनुभएकाे थियो ।
विजयी तीन लघुकथाहरू विषयवस्तु, कथा चेत, नवीनता र सामाजिक सबै किसिमले उत्कृष्ट भएकाले वरिष्ठ साहित्यकार विश्वराज अधिकारी, श्रीओम श्रेष्ठ रोदन र दीपक लोहनीको संयुक्त निर्णयमा सर्वोत्कृष्ट घोषित गरिएको हो ।
“प्रतियोगितामा प्रतियोगीका रूपमा ११ वटामात्र लघुकथा प्राप्त भए पनि प्राप्त लघुकथाहरू उत्कृष्ट थिए । ”, निर्णायकमध्येका श्रीओम श्रेष्ठ राेदनले भन्नुभयाे, “निर्णायकहरूकाे व्यक्तिगत मूल्याङ्कनपश्चात् सामूहिक छलफलबाट रहेक किसिमले उत्कृष्ट ठहरिएका डा. कुसुमाकर शर्मा गौतम, रेहित सैजु “विकल्प” र शिवप्रसाद पाण्डे लघुकथाहरूलाई वियजी घाेषित गरिएकाे छ ।”
प्रतियोगिताका लागि जम्मा ११ वटा लघुकथाहरु प्रतियोगीका रूपमा प्राप्त भएका थिए । आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित साहित्यकारहरुले पनि रचना पठाएकोमा आयोजक घोस्ट राइटिङ् नेपाल तथा संयोजक साहित्यपोस्ट दुवैले स्रष्टाहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।
लघुकथा प्रतियोगिताकाे तीसौँ चरण भाेलिबाट सुरू हुनेछ ।
पढ्नुहाेस् उनन्तीसौँ चरणका विजयी लघुकथाहरूः
नेपालभाषा अनुवाद शृङ्खला २३